PressReader - Ilanga: 2018-11-05 - Bakhala ngesihlobo ngotholwe efile
Bakhala ngesihlobo ngotholwe efile
Isidumbu besishisiwe, sikopolotwe amehlo futhi sesonakele
Ilanga - 2018-11-05 - Izindaba - NOMFUNDO NGWANE noNONHLAKANIPHO SHINGA nomfundo@ilanganews.co.za
KUSOLAKALA ukuthi uqale wadlwengulwa owesifazane otholwe ebulewe eLovu ngeledlule.
Isidumbu sikaNkz Nokwanda Xulu (28) wase-Adams sitholwe eceleni komuzi wesihlobo sakhe sishisiwe, sikopolotwe amehlo futhi sesonakele.
Umndeni kamufi, okhala ngokushaya ngolonwabu kophenyo lwamaphoyisa kulesi sigameko, uthi kawungabazi ukuthi isihlobo sawo sinesandla ekufeni kwendodakazi yawo.
ILANGA lizifikele mathupha kwaXulu laxoxa nonina kamufi, uNkk Jaheni Xulu, othe empeleni lona wesilisa uyisihlobo sabo futhi bakhonza naye ebandleni lamaNazaretha.
Uthi umufi ubecelwe yisihlobo sabo ukuba ayosiza emzini waso, asigadele izingane njengoba sihanjelwe yinkosikazi yaso.
Ngenxa yokuthi bebemazi futhi behlobene, kanti wake wasebenza noyise kamufi, uNkk Xulu uthi kabazange babe nenkinga ngalokho. Umufi ubenezinyanga ezine esebenzela lona wesilisa.
“NgoLwesibili ngeledlule, ngifonelwe yiso lesi sihlobo ekuseni ngovivi, sisibikela ukuthi sibuye emsebenzini ekuseni - kade singena ebusuku - indodakazi yami ingekho, izingane zilele zodwa endlini.
“Uthe ufice ophaqa ebibagqokile nomakhalekhukhwini wayo kusofa. Ngivuke ngaleso sikhathi sanikela khona nodadewabo, sifuna ukuyozwa ukuthi kwenzekeni ngendodakazi yami.
“Sifike isihlobo sethu sisekhishini kuvalwe isango lomnyango, saxoxa nathi sime emnyango, nakhona akukho ebesisitshela khona, yithina ebesilokhu sisixina ngemibuzo ukuthi ihambe kanjani indodakazi yami.
“Bekubonakala nje ukuthi besingenasikhathi nathi, singafuni nokuthi singene emzini waso. Ngicele ukuqalaza ngemuva komuzi ngoba ngizitshela ukuthi mhlawumbe sizombona ecashe khona, kodwa sathi singazihluphi ngokuqalaza ngoba ngeke sithole lutho. Sigcine ngokuvalelisa ngoba besibona ukuthi akanasikhathi,” kusho uNkk Xulu.
Uthi baphume emzini wesihlobo benganelisekile. Sebesemgwaqweni, bafikelwe yinto ethi mabaphindele emuva. Bahlangane nesihlobo sabo sisemgwaqweni phambi komuzi waso, nakhona sangakhuluma lutho, kwaze kwaqhamuka umakhelwane waso obabone bemile, bebonakala ukuthi kukhona okubaphethe kabi emoyeni.
Umakhelwane ubuze isihlobo ukuthi ngabe kukhona inkinga yini njengoba beme kanje, kodwa sangayiveza indaba yokunyamalala ku-kamufi, kunalokho saqamba amanga sathi kakukho nkinga.
Uthi okubenze basole kakhulu ukuthi kukhona okushaya amanzi ngaso, asizange sibabikele nomakhelwane ukuthi silahlekelwe yintombazane esebenza kwaso.
“Sisuke ngalo uLwesibili ekuseni sayovula icala ngokulahleka kwendodakazi yami. Sigcine ukukhuluma nesihlobo sethu ngoLwesibili sisuka kwaso. Asizange sisazihlupha ngokusifonela sisibuze nokuthi sihambe kanjani emaphoyiseni, sizwe nokuthi iyatholakala yini indodakazi yami.
“Uze wazosifonela ngoLwesine ngabo-5 ntambama esesibikela ukuthi isidumbu sendodakazi yami sitholakale kwamakhelwane wakhe. Ukusuka emzini wami ngiya emzini wakhe akupheli ngisho imizuzu ewu-20, kodwa sifike engasekho endaweni yesigameko, satshelwa ngabantu esibaficile ukuthi uthe uphuthuma kwadokotela.
“Endaweni isidumbu esithola- kale kuyona, besimbozwe ngodoti sishisiwe, isingezansi singagqokile, sikhombisa ukuthi ushayiwe," kusho uNkk Xulu.
Uthi intombazane yakwamakhelwane okutholakale khona isidumbu, ibatshele ukuthi isihlobo sabo sifike sekuze kwafika namaphoyisa, sebekade befikile endaweni yesigameko, nakhona sangasondela eduze kwabo, sama kude.
Ngesikhathi ILANGA lishayela amaphoyisa lifuna ukuthola kabanzi ngalolu daba, lithole ukuthi isitatimende esibhaliwe mayelana nokuduka kukaNkz Xulu, siyashayisana nokushiwo wumndeni.
Ebikelwa ngalokho unina kamufi, uthe lesi sitatimende kasenziwanga yibona, bayasola ukuthi konke lokhu okubhalwe ngamaphoyisa akunikwe yisihlobo sabo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Col Thulani Zwane, uthe likhona icala elivuliwe lokubulala, amaphoyisa asaphenya, bekungakaboshwa muntu.
Besimbozwe ngodoti sishisiwe, isingezansi singagqokile.
NGUNKZ Nokwanda Xulu isidumbu sakhe esitholwe eceleni komuzi wesihlobo sakhe, sikopolotwe amehlo futhi sesonakele.